ओमकार टाइम्स News Desk – OMKARTIMES
Posted on २०७७ मंसिर ११ by News Desk
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तोकिएको छ ।
नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादित जनसरोकारका काम कारवाहीलाई यथार्थ तथा तथ्यगत रुपमा सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषण गर्नका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुँवरलाई केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तोकिएको उक्त सचिवालयले बिहीबार जनाएको छ ।
यसअघिका प्रवक्ता कुवेर कडायतको प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय जर्गाह, नवलपरासीमा सरुवा भएपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी कुँवरलाई दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
Posted in देशLeaveaComment on नेपाल प्रहरीको प्रबक्तामा कुवर
सोलुखुम्बु । कागेलडाँडा विमानस्थलमा पुनः उडानपूर्व प्राविधिकसहितको टोलीले निरीक्षण गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इञ्जिनीयर, प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेत तथा थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईसहितको टोलीले बुधबार अवलोकन गरेको हो ।
पाँच वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहेको विमानस्थलको निरीक्षणपछि रेखाङ्कनको काम शुरुआत भएको प्रदेशसभा सदस्य बस्नेतले जानकारी दिए । विसं २०५२ मा निर्माण शुरु भएको विमानस्थलमा २०६२÷६३ देखि उडान सेवा शुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सले पनि उडान भरेका थिए । यसपछि उडान सेवा पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो ।
विमानस्थललाई सञ्चालनका लागि सांसद हेमकुमार राई, प्रदेश सभासद् बस्नेत, नेकपा प्रदेश नं १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी तथा थुलुङ दूधकोशीका अध्यक्ष राईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बारम्बार ध्यानकर्षण गराउने काम गरेका थिए ।
पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले गत कात्तिक २१ गते विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मङ्सिर दोस्रो साता उडान सेवा शुरु गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सको विमानले उडान भर्ने सहमति भएपछि प्राधिकरणका इञ्जिनीयरको टोलीले विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थुलुङ दूधकोशीका अध्यक्ष राईले बताए ।
निगमको विमानले उडान भर्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौतासमेत भएको छ । विमानस्थलमा उडान सेवा सञ्चालन गराउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले बारम्बार माग गर्दै आएका थिए । हाल जिल्लामा रहेका चार विमानस्थलमध्ये तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्ला र फाप्लु विमानस्थल सञ्चालनमा छ भने स्याङ्बोचे विमानस्थलमा हेलिकोप्टरले कहिलेकाहीँ उडान भर्दै आएको छ ।
गाउँको बीचमा रहेको काँगेलडाँडामा भने पाँच वर्षदेखि उडान भएको छैन । सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्लाको सूचीमा रहेको सोलुमा अहिले महाकुलुङ गाउँपालिकाको गुदेलमा पुनः अर्को विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन काम भइरहेको बताइएको छ ।
Posted in समाचारLeaveaComment on सोलुखुम्बुको काँगेलडाँडा विमानस्थलमा रेखाङ्कन थालनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले कोभिड–१९ को समस्याका बेला सरकारको सहयोग परिमाणमा नभएर क्षमता र दक्षतामा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समस्यामा परेका निजी क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि सरकारको क्षमता हेर्नुपर्ने बताए ।
‘कोभिड–१९ को समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायी साथीहरुलाई लाग्ला समस्यामा सरकारले सहयोग गरेन, ठूलो आर्थिक सहयोग गरेन । तर यहाँ सरकारकै अवस्था नाजुक छ । भए त सहयोग गर्ने हो, नभए के गर्ने ? कसले कति गर्यो र के गर्यो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार सहयोग गर्ने हो । जे गरेको छ सरकारले आफ्नो गछेअनुसार गरेको छ । यसबाट सन्तुष्टि मान्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओली भने ।
‘उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले किन सपोर्ट गर्न सकेन ? पैसा किन दिन सकेन ? भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर हामीले गछेअनुसार सहयोग गर्ने हो । हामीसँग सेभिङ्ग कति र योग्यता क्षमता कति छ त्यो हेर्नुपर्छ । हामीसँग प्रयाप्त स्रोतहरु छैनन्, त्यसैले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न सकेनौं । तर जेजति छ, त्यसबाट सरकारले सकेको सहयोग गरेको छ । यसबाट सन्तुष्टि मान्नुस् ।
हामी भन्दा ठूलठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुसमेत कोभिडका कारण खस्केका छन् । ठूलो आर्थिक सामाजिकसहित मानवीय क्षति समेत व्यहोरेका छन् । भलै तुलनात्मक रुपमा हामीले कम क्षति व्यहोरेका छौं । यो मानेमा कोभिड १९ नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनिकरणमा सरकार सफल छ । समयमै हामीले कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा नलागेका भए नसोचेको परिणाम व्यहोर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तै अवस्था आएन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पनासहित सरकार तिव्र आर्थिक वृद्धिको गतिमा अघि बढेकोमा कोभिडले केही समस्यामा पारेको बताए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८.५ को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेकोमा कोभिडका कारण शून्यमा नै झर्न पुगेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले खस्केको मुलुकको अर्थतन्त्र उठाउन सरकार, निजी क्षेत्र, व्यक्ति विशेष तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरुसमेत मिलिर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यसका लागि स्वदेशी लगानीसहित विदेशी लगानी समेत भित्र्याउँदै मुलुकको उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यात बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए ।
Posted in राजनीतिLeaveaComment on सरकारको सहयोग परिमाणमा होइन, क्षमतामा हेरौंः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं : नेपाल भारत विदेश सचिवस्तरीय वार्ता शुरु भएको छ । दुवै देशका विदेशसचिवबीच काठमाडौंमा वार्ता भइरहेको हो ।
वार्तामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र भारतका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव हर्षबद्र्धन श्रृंगलाको नेतृत्वमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति छ । लामो समयदेखि नेपाल भारतबीच उत्पन्न विवादलाई यो वार्ताले समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नयाँ नक्शा जारी गरेपछि दुवै देशबीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि नेपालले गरेको पटक पटक वार्ताको प्रयासलाई भारतले वेवास्ता गर्दैआएको थियो । त्यही क्रममा विदेशसचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणले दुवै देशबीच उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्दै सहकार्य, समन्वय र सहयोगको पूर्ववत बाटोमा डोर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि भारतका विदेश सचिव श्रृंगला विशेष विमानबाट बिहीबार काठमाडौँ आएका थिए । उनी दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँ आइपुगेका हुन् । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च तहका नेता तथा अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
Posted in राजनीतिLeaveaComment on नेपाल भारत विदेश सचिवस्तरीय वार्ता शुरु
नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल खरीद गरेको छ ।
भारतीय सप्लायर इन्डियन पोटास लिमिटेडमार्फत साउदी अरेबियाबाट डीएपी र बेलारुसबाट पोटास खरीद गरेको हो । दुवै मल कृषि सामग्री कम्पनीको भण्डारणमा आइपुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो बाहेक ३० हजार मेट्रिक टन युरिया दुबईस्थित स्विस सिंगापुर सप्लायरमार्फत चीनबाट खरीद गरिएको छ । उक्त मल बोकेको पानी जहाज कलकत्ता आइपुगेको छ भने त्यहाँबाट रेलमार्फत कलकत्ताबाट नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
जहाजले ३० हजार मेट्रिक टन मल बोक्छ भने एउटा रेलले करिव २५ सय मेट्रिक टन मल ढुवानी गर्न सक्छ । यो सबै मल आउँन करिव ३ साता लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । ७५ हजार मेट्रिक टन डीएपी आउने क्रममा रहेको छ भने थप ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरीद प्रक्रिया अघि बढाईको छ ।
त्यस्तै युरिया मल ५० मेट्रिक टन पनि आउने क्रममा रहेको छ भने ३० हजार मेट्रिक टनको खरीद सम्झौता भई एलसी खोल्ने क्रममा रहेको छ । थप ६० हजार मेट्रिक टन युरिया खरीदका लागि सप्लायरसँग सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।
सबै मल आपूर्ति ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरीद गरिएको छ । मल प्राप्त भएपछि चालू वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनीले ३ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
कम्पनीले हालसम्म प्राप्त गरेको र खरीद प्रक्रियामा रहेको मलबाट अहिलेको गहूँबाली तथा आगामी सिजनको बालिहरुका लागि मल अभाव नहुने कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल वर्षमा ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भएता पनि प्रभावकारी माग भने ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । नेपाल सरकारले मलका लागि विनियोजन गरेको कूल अनुदान बजेटको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीलाई र बाँकी ३० प्रतिशत बजेट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । ती कम्पनीहरुले प्राप्त बजेटका आधारमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत विश्व बजारबाट मल खरीद गर्दछन् ।
मल आउने क्रम जारी रहेकाले अभाव नहुने पनि डा.कार्कीले बताए । कृषि सामग्री कम्पनीले उन्नत जातको खाद्यान्न तथा तेलका लागि तोरीको बिउ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । माटो सुधारका लागि कृषि चून पनि बिक्रीवितरण गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
Posted in समाचारLeaveaComment on २९ हजार मेट्रिक टन मल खरीद, आगामी सिजनका लागि अभाव नहुने
संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक निकायमा समानुपातिक र समावेशी रूपमा नियुक्ति नहुने गरेको भन्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरू समानुपातिक, समावेशी भएनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । समानुपातिक, समावेशी होस्, कसैको पक्षपातपूर्ण नहोस् भनेर कानुन नै बनोस् भनेर समानुपातिक समावेशी सम्बन्धित संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विधेयक ल्याउनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।’
यसैगरी, समितिले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पद पूर्तिका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महिला, दलितलगायतका कतिपय आयोगहरू स्थापना भएदेखि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति नभएका तथा केही आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरी बाँकी पद रिक्त रहेकाले ती पद पूर्तिका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिका कारण कोरम नपुग्ने गरेको भनेपछि सभापति कर्णले कोरम पुर्यार्उने कुरा समितिमा नगर्न भनेका थिए ।
‘संविधानमा भएका निकायहरू, संवैधानिक आयोग जबसम्म पूर्ण हुँदैनन् तबसम्म संविधानको कार्यान्वयन पूरा हुँदैन,’ सभापति कर्णले समितिले दिएको निर्देशनबारे भने, ‘त्यसैले, अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरू महिला, दलित, जनजजाती खाली छन् । निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियारमा पदहरू खाली भएकाले अविलम्ब सरकारले पूर्णता दिइकन संविधान कार्यान्वयनलाई पूरा गरोस् भनेर निर्देशन दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समितिले तीन पटक बोलाउँदा पनि नआएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक बोलाइएको थियो । आउँछु भन्ने तर नआउने गरेको सभापति कर्णले बताए । अन्तिम समयमा यसपटक पनि प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएका थिए ।
Posted in समाचारLeaveaComment on समानुपातिक र समावेशी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन
कोभिड—१९ का कारण ९ महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ । कीर्तिपुरमा रहेको क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको आजबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको हो । प्रशिक्षक जगत टमटाको नेतृत्वमा ९ महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएको टीमले स्वास्थ्य सुरुक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएको छ ।
सुरुमा बन्द प्रशिक्षणका लागि २२ जना खेलाडीलाई बोलाएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अहिले २७ जनालाई प्रशिक्षणमा राखेको छ । यद्यपि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित पाँच जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागि हुन पाएका छैनन् । कप्तान मल्लसहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेललाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले मैदान उत्रिएका छैनन् ।
गत मंगलबार गरिको परीक्षणमा उनीहरुमा कोरोना देखिएको थियो । वसन्त रेग्मी पनि संक्रमित छन् । अहिले रित गौतम, अनिल शाह, कुशल भुर्तेल, बिक्रम शोब र लोकेश बमलाई पनि क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको छ ।
Posted in खेलकुदLeaveaComment on नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु
स्थानीय प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएपछि महोत्तरीको तनाव क्रमशः सामान्य हुँदैछ । बर्दिबासमा छ वर्षीया बालिकाको अपहरणपछि हत्या र सोविरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी घाइते भएका एकको मृत्यु घटनाले थप आन्दोलित भएको महोत्तरीमा सम्बद्ध पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएपछि अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको हो ।
बुधबार साँझ बर्दिबासमा नागरिकस्तरमा गठित वार्ता समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालबीच पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, दुवै घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने, प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सञ्जयलाई शहीद घोषणा गर्ने र प्रदर्शनमा घाइते भएकालाई उचित उपचार खर्चको व्यवस्था गर्ने विषयमा गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको हो । यो चारबुँदे सहमतिको नागरिकस्तरमा गठित वार्ता समितिका संयोजक चिरञ्जीवी हमाल र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटुवालले पुष्टि गरे ।
दुवै पक्षबीच प्रदर्शनका कार्यक्रम रोक्ने र भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पहलकदमी बढाउने टुङ्गो भएको छ । यद्यपि जिल्लाका अन्य भेगमा प्रदर्शन रोकिए पनि बर्दिबास नगरका छिटफुट ठाउँमा अझै टायर बाल्ने र सवारी साधन रोक्ने काम भइरहेको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । सहमतिपछि सडक अवरोध गर्नेसँग समितिको सम्बद्धता नरहेको संयोजक हमालले स्पष्ट पारे ।
गत आइतबार अपहरणपछि हत्या गरिएकी बर्दिबास–१४ की छ वर्षीया बालिका गुलाव शाह (गुलवशा) खातुनका हत्यारालाई हँदैसम्मको कारवाही र मङ्गलबार बर्दिबासमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका बर्दिबास–१ का बुद्धिराज (सञ्जय) न्यौपानेलाई शहीद घोषणा गर्दै क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्चको माग गर्दै बुधबार बर्दिबासका अतिरिक्त जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर, सम्सी, सीतापुर र गौशालासहितका ठाउँमा प्रदर्शन भएका थिए । बर्दिबासमा जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनकारीले दिनभर प्रदर्शन गरेका थिए ।
गत आइतबार अपहरणमा परेर हत्या गरिएकी बालिकाको शव प्रहरीले सोमबार मध्यरातमा उनको घर नजिकै बोरामा खाँदिएको अवस्थामा बरामद गरेको हो । यस घटनामा प्रहरीले गौशाला नगरपालिका–५ का २६ वर्षीय अरुणकुमार साहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिसकेको छ । बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । यद्यपि यो पक्ष अस्पतालको परीक्षण रिपोर्टले स्पष्ट पार्ने जिल्लाका प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
बालिकाको शव बरामद भएपछि मङ्गलबार बर्दिबासमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई भगाउन गोली प्रहार गर्दा सञ्जय न्यौपाने र बर्दिबास–५ का श्याम कार्की घाइते भएका थिए । न्यौपानेको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ भने कार्कीको काठमाडौँमै उपचार भइरहेको छ । अर्का बाँसको भाटाले लागेर घाइते भएका अफताव आलम बर्दिबासकै उपचारले निको हुँदै गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन चापागाईंले जानकारी दिएका छन् ।
Posted in समाचारLeaveaComment on छ वर्षीया बालिका हत्या प्रकरण : चारबुँदे सहमतिसँगै महोत्तरीको अवस्था सामान्य हुँदै
झापा । चरा खोजकर्ता देवेन्द्र खरेलले मेचीनगरमा ‘हरित परेवा’ प्रजातिको चरा फेला पारेका छन् । वैज्ञानिक नाम ‘डुकुला एनिया’ र अङ्ग्रेजी नाम ‘ग्रिन इम्पेरियल पिजन’ भएको उक्त चरा मेचीनगर नगरपालिका–७ को सतिघट्टामा सिमलको रुखमा भेटिएको हो । नेपालमै पहिलोपल्ट सो प्रजातिको चरा भेटिएको उनको जिकिर छ ।
चराका बारेमा पुस्तक लेख्दै आएका डा.हेमसागर बरालले उक्त चरा नेपालमा पहिलोपल्ट भेटिएकोष्टि गरिसकेका छन् । “मैले यही मङ्सिर ९ गते बिहान ८ः३० बजेतिर चराहरुको खोजी गर्दै जाँदा सिमलको रुखमा चार वटा अनौठा परेवाजस्ता चरा देखेँ”, मेचीनगर–६ निवासी खरेलले .भने, “फोटो खिचेर पक्षी संरक्षण सङ्घ र डा बराललाई पठाएँ, उहाँले यो पक्षी हरित परेवा रहेको र पहिलोपल्ट भेटिएको पुष्टि गर्नुभयो ।”
चराहरुको खोजी र संरक्षणमा पाँच वर्षदेखि लागिरहेका उनले झापा, इलाम, सुनसरी, चितवनलगायत स्थानमा डुलेर पक्षीको तस्वीर खिच्ने र तिनको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा ८८६ प्रजातिका चरा भएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ । हरित परेवालाई अहिलेसम्म पाइने चराको सूचीमा राखिएको छैन । अब चराहरुको प्रजाति ८८७ पुगेको मान्नुपर्ने चरा खोजकर्ता खरेलले जिकिर गर्नुभयो । घरेलु परेवाभन्दा १० सेन्टिमिटर लामो र दुवै पखेटामा चम्किलो हरियो रङ हुने भएको हुँदा सो प्रजातिको परेवा ढुकुरभन्दा दोब्बर र घरेलु परेवाभन्दा निकै ठूलो आकारको हुन्छ ।
हरित परेवा पाइनु चरा संरक्षण र चरा पर्यटनका दृष्टिले ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । मेचीनगरका मेची र नन्दा नदीको किनारका दलदले क्षेत्र र इलामसँगको सिमानामा रहेको चुरे जङ्गल क्षेत्रमा ३०० प्रजातिका चराको बासस्थान भएको बताइन्छ । उनले ती चरालाई संरक्षण गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिनेतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।
Posted in समाचारLeaveaComment on मेचीनगरमा भेटियो ‘हरित परेवा’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका निम्ति सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताएका छन् । विष्णुलक्ष्मी साहित्यिक पुरस्कार समिति र भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाले यहाँ आज आयोजना गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा ‘दोलखाली सर्जक’ (पुस्तक समीक्षा) र ‘डाँडाको लाँकुरी’ (कवितासङ्ग्रह) विमोचन गर्दै मन्त्री गुरुङले आफूहरु परिवर्तन हुन तयार रहेको तर सत्ता र शक्तिकै लागि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री गुरुङले कोरोना महामारी जस्तो सङ्कटका समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद हुनु दुःखद् भएको बताउँदै भने “सरकारले जनताको भावनाअनुसार जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गरिरहेको छ, यस बेलामा सकारात्मक सोचका साथ सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”
सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दोलखा जिल्लास्थित ‘दोलखा फिल्मी सिटी’ को संस्थागत विकासमा सरकार लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले दोलखा साहित्य समृद्धिका लागि अनुपम थलो भएको बताउँदै त्यसलाई थप उचाइमा पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरे । साहित्यकार एमबी खड्काद्वारा लिखित ‘डाँडाको लाँकुरी’ कवितासङ्ग्रहमा ५० कविता समाविष्ट छन् । त्यसैगरी ‘दोलखाली सर्जक’ मा २४ पुस्तकमाथिका समीक्षा संलग्न छन् ।
Posted in समाचारLeaveaComment on कसैको स्वार्थका निम्ति सरकार परिवर्तन हुँदैनः मन्त्री गुरुङ